musha Asia Jack Ma Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yebhizinesi reChinese rine mukurumbira "Feng Qing Yang". Yedu Jack Ma Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wemienzaniso mikuru yepasirose yemabhizimusi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveJack Ma's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Jack Ma Upenyu hwepakutanga uye Yemhuri Yepashure:
Jack Ma - akabhabhatidza Ma Yun - akazvarwa pazuva re10th yaGunyana 1964 kuguta rine vanhu vazhinji reHangzhou kuChina. Ndiye wechipiri pavana vatatu akazvarwa kuna amai vake, Cui Wencia uye kuna baba vake, Ma Laifa.
Ichokwadi kutaridzika kwake uye matauriro, Ma's ane yake mhuri mavambo ari China. Iye wedzinza reAsia nekumabvazuva-kweAsia mhuri midzi. Bhizimusi bhizimusi akarererwa mumhuri yepasi-yemhuri kumashure kweguta rake rekuzvarwa muHangzhou kwaakakurira pamwe nevakoma vaviri - mukoma nemunin'ina.
Kukura muHangzhou, mudiki Ma aive mwana asina hunhu asina hanya aive nemhando dzakasiyana dzekuvaraidza dzehudiki dzaisanganisira kuunganidza makiriketi nekuzvimisidzana. Uye zvakare, aive asiri iye wekunyara pakutora kurwa nevezera rake kunyangwe pavakange vari vakuru kwaari. Nekudaro, humwe hunhu hwakaisa zvine hungwaru kuisa Ma parutivi kubva kuvana vazhinji vezera rake - ndiko kwaive kufarira kwake kudzidza zvinhu zvitsva zvinosanganisira mutauro.
Jack Ma Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Panguva iyo Ma aive akura makore masere, guta rake rekuzvarwa - Hangzhou yanga yave nzvimbo yekukwezva vashanyi zvichitevera kushanya kwaiye-Isu Mutungamiri Richard Nixon kuguta. Makore mashanu gare gare, wechidiki Ma akaita chinamato kubva mukumuka mangwanani-ngwanani kushanyira hotera huru yeHangzhou kwaakapa vashanyi mafambiro eguta mukutsinhana neChirungu Zvidzidzo.
Kunyange Ma aive pazviri, haana kuwanikwa achishayikwa padzidzo yake yechikoro chesekondari uye haana kuita maigigamu ake enguva refu semutungamiriri wekushanya akatambura. Ma aitozivikanwa kuve shamwari yevashanyi yeuyo akamutumidza zita rekuti 'Jack' nekuti aive nezvinetso nekududza zita raMa Chinese.
Jack Ma Pakutanga Yehupenyu Hupenyu:
Paakapedza chikoro chake chesekondari, Ma akanetseka nekuwana kubvumidzwa kukoreji kaviri. Akazowana nzvimbo kuHangzhou Normal University pamuedzo wake wechitatu uye akazove mukuru webazi revadzidzi asati apedza kudzidza neBA muChirungu Mutauro muna 1988. Mushure maizvozvo, Ma akashanda kwenguva pfupi semudzidzisi muChirungu neInternational Trade kuHangzhou. Dianzi University.
VERENGA Bill Gates Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Kunyangwe Ma aida basa rake uye aive echisikigo nevadzidzi vake, mubhadharo wakaderera wemadhora gumi nemaviri pamwedzi wakamuita kuti arambe achitsvaga mikana iri nani. Nepo mukana wacho waiita kunge uri kure zvakanyanya kuti usvike, Ma akatanga kambani yake yekutanga - Hangzhou Haibo Dudziro Agency iyo yakafungidzira mukupa dudziro yeChirungu nedudziro
Jack Ma Road Kune Mukurumbira Nyaya:
Hazvina kutora nguva refu Ma asati anzwa nezve internet mu1994 uye akaona iko kushaikwa kwemaChinese mawebhusaiti painternet semukana mukuru webhizinesi. Akawedzera mukana uyu nekutanga kambani yake yekutanga - China Mapeji akagadzira mawebhusaiti emabhizinesi eChinese.
Ma's China Mapeji akaratidzira kubudirira kukuru pamberi pekambani yekutaurirana - Hangzhou Telecom akaiburitsa nekumisikidza kambani inokwikwidza, Chinese peji. Kunyange zvakadaro, kubudirira kwaMa kwekutanga muindasitiri yeIT kwakabata hurumende yeChina iyo yakamubatsira kuti atungamire kambani yeInternet muBeijing.
Jack Ma Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Maitiro aMa akazvifungira, kushandira hurumende kwaisazomubatsira kubva kuchinjika kwaaida kutora mikana iyo internet yaive ichipa kunyanya mundima yaive isati yatorwa ye e-commerce. Nekudaro, Ma akasiya basa rake ndokutungamira timu yake kudzokera kuHangzhou kwaakavamba musika wepamhepo unonzi "Alibaba."
Alibaba akatanga kutsoka chaiko nekugashira rutsigiro rwemari yemadhora makumi maviri nemashanu emadhora iyo yakaibatsira kubudirira mukukura kwemamiriro ekunze nekuwedzera kumarudzi mazana maviri nemaviri. Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Ma's Alibaba akakura kuita kambani yekudyidzana ine mapfumbamwe makuru maSubidiaries ayo akamubatsira kumuita semumwe wevanhu vakapfuma kwazvo pasi. Iwo ma subsidiary anosanganisira Alibaba.com, Taobao Musika, eTao, Tmall, Alibaba Cloud Computing, 25.com, Juhuasuan, Alipay uye AliExpress.com. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Jack Ma Ukama Hupenyu Chokwadi:
Kune vanhu vashoma chete avo Ma vanoona sevanobatsira mukumuka kwake mukurumbira nyaya. Pakati peavo pane mudzimai wake akanaka Zhang Ying uyo waakasangana naye panguva yezvidzidzo zvavo paHangzhou Mudzidzisi Sangano Ma - uyo asingazivikanwe kuti akamboita shamwari dzevasikana asati asangana naZhang - akamutora semutambo wake wakakwana nekuti aimuyemura nekugona kwake uye akatomubatsira kuwana yake yekutanga online kambani - China Mapeji.
VERENGA Warren Buffett Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Kunyangwe zvishoma zvichizivikanwa nezve nguva yavakasunga pfumo, Ma naZhang vakaroora kwenguva yakareba uye vane vana vatatu. Ivo vanosanganisira mwanakomana anonzi Ma Yuankun nemwanasikana anozivikanwa saMa Yuanbao. Nekudaro, kuzivikanwa kweMa uye Zhang mwana wechitatu hakuzivikanwe panguva yekunyora.
Jack Ma Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Kufambira mberi kubva pahupenyu hwaMa hwerudo, hupenyu hwemhuri yake ndehwo hwakachengetedzwa kubva pakuonekwa. Tinounza zviripo titbits nezve nhengo dzemhuri yaMa kutanga nevabereki vake.
Nezve baba naamai vaJack Ma:
Baba namai vaMa vanozivikanwa saMa Laifa naCui Wencia zvichiteerana. Vabereki vemabhizimusi wemabhizimusi vaive nemhuri diki dzaizivikanwa uye vaishanda sevaimbi vechinyakare. Ivo vanozivikanwa zvakare kuti vakashanda sevanyori venhau kuitira kuti vape Ma nevanin'ina vake zvakanakisa zvehupenyu hwepakutanga zvavaikwanisa.
Nezve hama dzaJack Ma uye hama:
Ma ane mukoma mudiki anozivikanwa mukoma nemunin'ina wechidiki uyo iye pasina mubvunzo aive nehunhu hunofadza pamwe nezvakaratidzwa muzvikamu zvemifananidzo zvavakatora sevana. Pane imwe ndege isingazivikanwe, hapana zvinyorwa zveasekuru vaMa naambuya kana vanababamunini ivo babamunini, vanatete, babamunini, babamunini pamwe nababamunini vasati vazivikanwa.
Jack Ma Hupenyu hwepamoyo:
Unoziva here kuti Jack Ma 'anoratidzira hunhu hweVirgo Zodiac hunosanganisira kutarisisa, kungwara kwepfungwa uye Kuzvininipisa? Kuwedzerwa kuMa's Persona ndiko kugona kwake uye kugona kuendesa hurukuro yekukurudzira inosimudzira vanhu muchiito.
Anodyara mari uyo asinganyatso kuburitsa ruzivo nezve hupenyu hwake uye hwomunhu oga ane zvido muzvidzidzo, zvematongerwo enyika, kubiridzira, bhizinesi uye mari paari kuita zvinhu zvinosanganisira kuimba, kupenda, kutamba, kuverenga uye kunyora kung Fu ngano, kudzidzira Tai Chi pamwe nekushandisa nguva yakanaka. neshamwari nehama.
Jack Ma Mararamiro Echokwadi:
Taura nezvekuti Jack Ma anogadzira uye anoshandisa sei mari yake, ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora makumi mana nemazana mana emadhora panguva yekunyora iyi bio. Hupfumi hwaMa hwakawanikwa munzvimbo dzayo dzeAlibaba Group makambani pamwe nemateki emari zhinji. Nekuda kweizvozvo, hazvishamise kuti anorarama hupenyu hwepamusoro-soro hunoratidzwa nekuva kwake nedzimba dzemhando yepamusoro nemotokari.
Idzi dzimba dzinosanganisira imba inosvika mamirioni zana nemakumi mapfumbamwe nemana emadhora kuHong Kong uye $ 193 Mamiriyoni ePfuma muNew York. Yakawedzerwa kuMa inoita kunge isingaperi runyorwa rweaseti yake anodhura mota muunganidzwa uyo unozvirumbidza nezvevatasvi vakaita saBMW 23Li, Roewe RX760 SUV. Ma anogutsawo kudiwa kwake kwekumhanya nendege nekuve ne $ 5 mamirioni akakosha jet yakazvimiririra inonzi Gulfstream 61.5.
Jack Ma Untold Chokwadi:
Tisati tazvidaidza kuti kuputira paJack Ma nyaya yehucheche uye biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi nezvake.
Ma haasi munhu anonamata, zvakadaro, anofarira zvechitendero uye aratidzira kuonga kweBuddhism, chiKristu uye chiTaoism. Anorangarira chiBuddhism sedzimwe tsika nekuti yakave yakamisikidzwa mumararamiro eChinese kwemazana emakore.
Kunyangwe iyo bhizimusi magnate isingaite tsika kunze kwekusvuta, iye - panguva yekunyora - akapihwa yekuva nezvinwiwa zvakaomarara sedoro newaini pamabasa eruzhinji.
About Alibaba zita:
Bhizimusi wemabhizimusi akatumidza yake pamusika pamusika wekutanga "Alibaba" nekuti aiziva nyaya ya "Ali Baba neMakumi mana eMbavha", kubva muunganidzwa wenyaya dzeArabic, inonzi "One Thousand and One Nights". Munyaya iyi, chirevo "Vhura Sesame" zvine mashiripiti chinovhura musuwo wakavanzika kudura repfuma. Nenzira imwecheteyo, Alibaba anovhura sesame kumakambani madiki- kusvika pakati nepakati.
Kure nebhizinesi, Ma anoratidza kufarira hunyanzvi kusanganisira kuita. Akagadzira kuita kwake kwekutanga aine kung fu pfupi firimu inonzi "Gong Shou Dao" (2017). Gore rimwe chetero, Ma aive anoshingairira kutora chikamu chemutambo wekuimba. Akaitawo mitambo panguva yeAlibaba yegumi nemasere-gore rebato.
Nezve zita raJack Ma:
Nickname yaJack "Feng Qing Yang" chirevo cheChinese chinoshandura se "Mhepo Inozorodza". Kunyangwe iro zita remadunhurirwa raive zita remunhu anodzora mapakatwa mune inozivikanwa Chinese chinyorwa, Ma anochida uye akanamira nacho kwenguva yakareba kwazvo.
Thanks for reading vedu Jack Ma Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!